မလွမ်းတော့ဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » မလွမ်းတော့ဘူး	18
Posted by aye.kk on Dec 3, 2014 in Poetry | 18 comments
ခွဲကွာသွားတဲ့ အတိတ်တွေနဲ့ ….
ငါနဲ့ ဆိုင်နေတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကိုသာ ငါမြတ်နိုးတတ်ရမယ်…။
ဇာပဝါအနားစလို လှနေပါစေ ၊ ငါမျှော်လင့်လို့ မှမရတာ….။
ဗုံဗုံ says: သူ့ကိုလည်းမလွမ်းတော့ဘူး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: အနော်လည်း လွမ်းတော့ဝူးးး
ကိုယ် မပိုင်မှန်း သိသွားလို့။
aye.kk says: ကောင်းပါ၏..ကောင်းပါ၏။ အန်တီအေး
ဗုံဗုံ says: သများငိုတာက ပိုလှသလားလို့ မမဂျီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2373
aye.kk says: သူများအတွက်ရော ကိုယ့်အတွက်ရော
မငိုရဘူး။ တိတ်တိတ်…. ငိုရင်.. မလှဘူး ။ အငိုချင်းလည်း မပြိုင်နဲ့ နော်။။
တောတွင်းပျော် says: ငိုလို့ များလှမယ်ဆိုရင်
တစ်နေ့၂၅ နာရီငိုမယ်ပေါ့ ..
ဗုံဗုံ says: အမလေး .. ဦးပျော်ရဲ့ ..အဟီး..အဟီး… Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ငိုချင်ရင် ဒါညိုးအော်ငိုရဒယ် Was this answer helpful?LikeDislike 2373
aye.kk says: မလွမ်းတာ…
ပထမဦးဆုံးမန့် သူမို့ အန်တီကကျေးကျေးပါနော် ။။
တောတွင်းပျော် says: မနေ့ က
ငါ ဗိုက်မှောက်နေခဲ့ တယ်…
မြိုဆို့ ဝမ်းပြည့် 
ဗိုက်ကြီးအင့် လို့ 
ကျဆိမ့် ရည်လေး သောက်ချင်တယ်…
ဗိုက်လေးဆာမှ လွမ်းတတ်တဲ့ 
aye.kk says: ဆာရင်စားလိုက်ပါ။
ဝုတ်ဝုတ်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ …နော်။
အခုမှလူ့ ဘဝရောက်လာတာ ဘာများကြာသေးလို့ လည်းကွယ်။
weiwei says: ငါဆိုတာ မရှိဘူးလေ အန်တီအေး …
aye.kk says: ဟုတ်ပါတယ်။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ကိုယ် မပိုင်ဆိုင်ရတော့ဘူးဆိုတာ သေချာလေလေ
ပို ပို လွမ်းလေလေ. . .
Kaung Kin Pyar says: ဒေါ်ဖွားမေလား….ဖွေးဖွေးလားဟေ…..
aye.kk says: လွမ်းတာကို
လွမ်းတယ် လွမ်းတယ်ဆိုပြီး မနားတမ်းမှတ်ကြည့်လိုက်နော်။။
မြစပဲရိုး says: လွမ်းတာ ကို လွမ်းတယ် လွမ်းတယ် မှတ်ပြီး
ဟိုဘက်က မွန်းခါး လေး တော့ လွမ်းဗျစေ နော် အစ်မအေး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2373
aye.kk says: အာရုံမှာချက်ခြင်းဖြစ်လာတာက တားမရ။
မွင်းခါးလေးတော့ ချွင်းချက်။ ရပါတယ် အမအေး။